Nagu saabsan - Xuzhou Kanfur Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd.
Xuzhou Kanfur Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd.
La aasaasay bishii Maarso 2012, Xuzhou Kanfur Elektaroonigga Teknolojiyada Co., Ltd. waa ganacsi hi-teknolojiyad casri ah oo isku dhafan R & D, naqshadeynta, Innovation, wax soo saarka iyo iibka, oo ku yaal Shiinaha Sayniska Jaamacadda Shiinaha ee Xuzhou. Bilowga aasaaska shirkadda, aaladaha caafimaadka, dhaqan celinta iyo wax soo saarka caafimaadka oo ah khadka ugu muhiimsan ee horumarka shirkadda.
Waqtigan xaadirka ah, shirkadu waxay leedahay koox R & D xirfadle ah oo xasiloon, iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyada aasaasiga ah ee R & D iyo tiknoolajiyada wax soo saarka iyo farsamaynta, iyo kooxda R & D waxay leeyihiin hal-abuurnimo xoog leh iyo xoog cilmi baaris cilmiyeed, dhammaan badeecadaha aan iibino waa kuwo madax bannaan waxaa soo saaray kooxdeena R & D waxayna leeyihiin xuquuq madaxbanaan oo dhameystiran.
Shirkaddu kuma guuleysan oo keliya sharafta "shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee sayniska iyo farsamada", laakiin sidoo kale waxay ka gudubtay "Shahaadada Nidaamka Maareynta Maaraynta Hantida Maskaxda", badeecadaha shirkaddu waxay sidoo kale ka gudbeen shahaadada CE Midowga Yurub, shahaadada FCC, shahaadda ISET. Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay leedahay dhowr qaybood oo ka badan 20 nooc oo badeecooyin ah oo suuqa yaalla, kuwaas oo leh jeermiska iyo shaqada jeermiska looga dhigo ee alaabada ugu waaweyn ay yihiin laambadda nadiifinta jeermiska ee loo yaqaan 'ultraviolet', qalabka ogaanshaha deegaanka ayaa leh qalab lagu ogaanayo formaldehyde, soo saaraha xididka, kontaroolada qolka sawnada. Shirkaddu sidoo kale waxay ku tiirsan tahay iyada R & D, wax soosaarka iyo faa'iidooyinka silsiladda kale ee warshadaha, Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Aasiya iyo suuqyada kale si ay u siiso wax soo saar, waxay ku guuleysatay kalsoonida dadka isticmaala.
Shirkadeena sidoo kale waxay leedahay awood baaris tayo sare leh oo dhanka cilmiga ah, qalab casri ah oo lagu kormeero iyo qalabka baaritaanka iyo nidaamka tijaabada adag ayaa ah dammaanada tayada wax soo saarka shirkada. Wax soo saarka shirkaddu waxay ku tiirsan yihiin tayo aad u fiican, saamiga suuqa ayaa sii kordhaya, iibkuna wuu sii kordhayaa. Shirkaddu waxay horumarisay shirkad farsamo ahaan hal-abuur leh oo leh astaamo casri ah oo gaar ah. Shirkadeena had iyo jeer waxay u hogaansantaa falsafada horumarinta shirkadaha "tiknoolajiyada marka hore, tayada ugu horeysa", si firfircoon oo wax ku ool ah u hirgelisa maareynta shirkadaha casriga ah, waxayna u heellan tahay inay noqoto jaangooyada warshadaha gudaha ee horseedka u ah. Muddo dheer, shirkadda waxaa ka go'an inay soo cusbooneysiiso baahiyaha macaamiisha, iyadoo la shaqeyneysa wada-hawlgalayaasha furan, oo ay ka go'an tahay inay bixiso xalal nidaamsan, wax soo saar iyo adeegyo, ayna ku dadaasho sidii ugu wanaagsan ay ugu abuuri lahayd macaamiisha qiimaha ugu badan. Xilligan casriga cusub ee teknolojiyadda oo ay ka buuxaan fursado, caqabado iyo tartan, horumarka shirkadda waa la horumarin doonaa. Waxaan sii wadi doonnaa hagaajinta nidaamka maamulka, kordhinta hordhaca shaqaalaha sayniska iyo teknolojiyada, cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka cusub iyo horumarinta suuqa, si aan u siino taageero xoogan shirkada sii socoshada iyo horumarka degdega ah. Shirkaddu waxay noqon doontaa mid u janjeedha dhanka suuqa, kor u qaadaysa horumarinta shirkadda iyadoo la adeegsanayo hal-abuurnimo teknolojiyadeed, waxayna ku dadaalaysaa inay u suurtageliso shirkadda inay sameyso tabarucaad sare xagga qalabka caafimaadka, dhaqan celinta iyo suuqyada caafimaadka.
Iyada oo tiknoolajiyada wax soo saarka wanaagsan iyo xakamaynta tayada adag. Qalab kasta, guddiga wareegga ama qayb ka mid ah, Comfort waxay si buuxda u xakameyn kartaa geeddi-socodka oo dhan laga bilaabo kaydinta si loo isticmaalo si loo hubiyo tayada xasilloon ee sheyga. Intaa waxaa sii dheer, xisaabinta tayada kahor intaadan ka bixin warshadda ayaa ah dammaanadda ugu fiican ee tayo sare leh.